Tokko Du’ee Tokko Hin Nyaatu… – YEROOBLOG
Tokko Du’ee Tokko Hin Nyaatu…
Yerooblog	Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	 June 16, 2014 December 25, 2015 1 Minute
Motummaan ADWUI/EPRDF, lafa Oromoo saba kaniiff laachuuf fidhii qaburraa kan ka’e Mastar Pilaanii Finfinnee jedhee karaa ittiin uummata keenya lafa isaarraa buqqisuu danda’u hojiirra oolchuuf halkaniif guyyaa dhama’aa ture. Maastar pilaaniin jedhame kun uummata Oromoo lafa isaaniirraa buqqa’uuf deeman osoo hin marii’achiisiin raawwachiisuuf Abbootiin aangoo ADWUI oliif gad jechaa turan.
Haata’u malee, karoora isaan baafatan kana barattoonni Oromoo Yunvarsiitii keessa barachaa jiraniifi qoote bultoonni Oromoo naannoo Finfinnee jiran, mootumman karoora jedhame kana akka hojiira hin oolchine daandeetti ba’uudhan karaa nagaa ta’een mormi dhaggeesisani. Garuu, wanti isaan eeggate wanta hamaadha. Looltoonni mootummaa gara laafina tokko malee ijoollee Oromootti kalattiin iiti dhukkaasuudhaan barattoota heddu (dhibba ol akka ta’u danda’u dubbatama) ajjeesan. Barattoota hedduuu immoo qabanii mana hidhaatti naqan; kan immooo mana barumsaa irraa ariitan. Gaaffii uummanni Oromoo kaase gaaffi abba biyyummaa ta’e osoo jiruu, mootummaan ADWUI jibba uummata Oromoof qabu agarsiisuuf jechaa ijoollee Oromoo mirgi uummata isaanii akkka kabajamu gaafatan, guyyaa adii rasaasan ficcissise.
Kaayyoon mootummaa ADWUI/EPRDF uummata Oromoo naannawaa Finfinnee jiraatan buqqisuudhaan saba biraa maqaa invastimantiitiin qubachiisuudha. Yeroo kun ta’u Oromoon Finfinnee fi naannawaa finfinneetti bakka hinqabu jechuudha. Afaan, aadaa fi maalummaan uummata Oromoo akka innni badu fi uummanni Oromoos akka dadhabu gochuuf yaalii godhamaa jirudha. Uummanni Oromoo garuu lafa jireenyi isaa irratti hundaa’e dabarsee ormaaf kennuuf akka hinbarbaadne ifatti mormii isaa ibsachuun agarsiiseera.
Kana booda uummmanni Oromoo akka kanaan duraa, callisee ajjeefamuun, dararamuun, qabeenya isaa saamamuun fi tuffatame jiraachuu hindanada’u. Kun yeroo amma kanatti kan yaadamu miti. Ijoolleen Oromoo Oromiyaa fi uummata Oromoo diina irra faccisuuf haga lubbuu isaanii wareeguutti gahaa jiru. Wareegamas jiru. Barattonni yuunvarsiitii adda adda keessatti osoo ummata isaaniif qabsa’ani ajjeffaman kanaaf ragaadha. Kanaaf, mootummaan ADWUI hacuucaa fi dhiibbaa uummata Oromoorratti gochaa jiru dhaabuu yoo baatee, uummanni Oromoo akka callisee isa hin ilaalle yeroo kamiyyuu caalaa hubachuu qaba. Kun ta’uu baanaan, walgaggalaafata taati, akka Haacaaluun welluu isaa keessati jedhetti.
Maasaan gamaa lafaa hinbaatuu
Baratoota Oromoo Yeroo Mormii Maaster Pilaanii rasaasaan HUmna Mootummaatiin rukutaman
Talbaa facaafata taatii
Tokko du’uee tokko hin nyaatuu
Yammoolee yaagarba ciisaa
Biyya ofii/Oromiyaa maaltu gaddhiisaa?
Published June 16, 2014 December 25, 2015
Previous Post Ode to Odaa
Next Post A BIG SHAME ON OROMIA RADIO & TELEVISION AGENCY!